ကျွန်မနဲ့ အင်တာနေရှင်နယ်ကလေးများ ~ YaWai (ပိုင်စိုးသူ)
Postado Monday, December 3, 2012 at 4:57 AM
ဖုန်းမှာပေးထားတဲ့ Alarm မြည်သံကြောင့် မဖွင့်ချင်၊ ဖွင့်ချင် အိပ်ချင်မူးတူး မျက်လုံးတွေကို အသာမှေးထားရင်း ခလုတ်ရှိရာ လက်လှမ်းပိတ်လိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ နောက်ကျိကျိနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် အချိန်ကို ထပ်ဆွဲဆန့်လိုက်ချင်သေးတယ်။ ဒါမဲ့ သတ်မှတ်ချိန်ရောက်ပြန်ရင်လည်း စိတ်တွေကတော့ လေးနေဦးမှာ အသေအချာ။
"သမီး… မထသေးဘူးလား… နောက်ကျမယ်နော်"
မီးဖိုချောင်ထဲက ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်ကနေ လှမ်းသတိပေးနေတဲ့ အမေ့ကို ပြန်ပြောရင်း မထချင်၊ ထချင်နဲ့ ပျင်းကြောတစ်ချက် ဆွဲလိုက်တယ်။ ဆစ်ခနဲနာကျင်သွားတဲ့ လက်ဖမိုးပေါ်က ဒဏ်ရာကြောင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေက အာရုံထဲမှာ တဝဲလည်လည်။ ဒဏ်ရာကိုမြင်တိုင်း မုန်းတီးမိတာ မဟုတ်ပေမဲ့လည်း ဒေါသစိတ်လေးက တစ်ချက်တစ်ချက် ဝင်ဝင်လာတယ်။ တစ်ခါလည်းမဟုတ်၊ နှစ်ခါလည်းမဟုတ် အမြဲလို ကြုံတွေ့နေရတတ်တဲ့ အဖြစ်တွေဆိုတော့လည်း သည်းခံရမှာပဲဆိုတဲ့ ဖြေသိမ့်တွေးပဲ ကျိတ်မှိတ်တွေးရပြန်တယ်။ နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ ၅ မိနစ်တောင်လွန်သွားပြီ။ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချ၊ ဆံပင်ကို ကလစ်နဲ့ညှပ်လိုက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်သန့်စင်ဖို့ အိမ်ရှေ့ရေချိုးခုံကို ထွက်ခဲ့တယ်။ မျက်နှာသစ်၊ ခြေလက်သန့်စင်၊ ဖြီးလိမ်းပြင်ဆင်ပြီးချိန်မှာ ယူနေကျ လက်စွဲတော် Laptop ကို ဘေးလွယ်အိတ်ထဲ အသာထည့်၊ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ စုံအောင် ပြန်စစ်လိုက်တယ်။
အိမ်ဝင်းထဲ ထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ နေပူရှိန်က ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တည့်တည့်မတ်မတ်။ ကျင့်သားရနေပြီးသား လေပူတွေကြားထဲ သက်မောပူပူတွေကို မှုတ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ မသွားလိုတာလည်းမဟုတ်။ တာဝန်ဆိုတာကို နားလည်မှုနဲ့အတူ သူတို့မျက်နှာလေးတွေ မြင်ပြန်တော့လည်း ထားမိတဲ့ စေတနာက ယိုင်ချင်ချင် ခြေလှမ်းတွေကို အားတွေ ဖြစ်စေခဲ့တာ ဒီတစ်ကြိမ်တည်းမှ မဟုတ်တော့တာ။ သူများတကာ အနားယူနေချိန်မှာ အတောက်ပဆုံးဖြာကျနေတဲ့ နေမင်းရဲ့ ပြင်းရှရှအရောင်တောက်တောက်တွေကို အံတုလို့ တရုတ်ဖြစ် စူပါကပ် အစိမ်းရောင် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကတော့ မြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက် မနော်ရမ္မံ ဥယျာဉ်နားက ထည်ဝါတဲ့ အိမ်ကြီးဆီ ဦးတည်ပြေးလွှားလျှက်…။
မန္တလေးမြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက်ခြမ်းနဲ့ တောင်ဘက်ခြမ်းတွေမှာ မြေကွက်လပ်တွေက အများသား။ အဆောက်အဦဆောက်ထားတဲ့ မြေနေရာတွေ ရှိပေမဲ့လည်း အနည်းအကျဉ်းသာ။ ခပ်ငယ်ငယ် ပျဉ်ထောင်အိမ်တွေနဲ့ တိုက်သေးသေးလေးတွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဟိုး.. မြို့ အစွန်အဖျားဆီ။ အုတ်တံတိုင်းသာ ခတ်ထားတဲ့ မြေတွေရှိသလို၊ အကာအရံ အတားအဆီးမဲ့ ကွက်လပ်ကျယ်တွေက ဘယ်အချိန်မှာ မြို့လယ်ခေါင်ကို ရွေ့လာမလဲ..။ ဒီမြင်ကွင်း ဒီအတွေးတွေကို မြင်မိ၊ တွေးမိတိုင်း ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အပူထက် ပိုပြီးပူလောင်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်မရဲ့ စိတ်ဝိဥာဉ်တွေဟာ အလွှားလိုက် အလွှားလိုက် ကွာကျနေသလိုပါပဲ။
ပေပေါင်း ဘယ်လောက်ကျယ်မယ်ဆိုတာ မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့၊ ထူထပ်တဲ့ သံတံခါးကြီးများ မြင့်မားခိုင်မာစွာ ကာရံထားတဲ့ ၄-ထပ်တိုက်အိမ်ကျယ်ကြီးရှေ့အရောက် ဟွန်းကို အသာတီးလိုက်တယ်။ လုံခြုံရေးအစောင့် ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ တံခါးမကြီးကနေ အိမ်ကျယ်ကြီးဆီ မောင်းဝင်လာရင်း ကားတွေအဝင်အထွက်နဲ့လည်း လွတ်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်၊ အရိပ်လည်းနည်းနည်းရနိုင်တဲ့နေရာမှာ ဆိုင်ကယ်ရပ်ပြီး လက်ကျင့်ပါတဲ့အတိုင်း ဇက်သော့အသာလှည့်လိုက်တယ်။
" Teachar ဇက်သော့မခတ်ပါနဲ့ "
လှမ်းအော်လိုက်တဲ့ လုံခြုံရေးအစောင့်ရဲ့ အသံကြောင့် ခေါင်းညိတ်ပြပြီး အသာပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ ဟုတ်သားပဲ။ သူတို့ရဲ့ အစင်းပေါင်းများစွာသော ကားတွေရဲ့ အဝင်အထွက်နဲ့ မလွတ်သေးရင် ကိုယ့်ဆိုင်ကယ်ကို လွတ်ရာကျွတ်ရာမှာ သူ ပို့ပေးထားဦးမှာ။ လုံခြုံရေးမျက်နှာကတော့ ခပ်တင်းတင်း။ ကိုယ့်ကို သူတို့လို​ ဝန်ထမ်းဆိုပြီးပဲ သတ်မှတ်ထားလေသလားမသိ။ ယူဆချင်သလိုသာ ယူဆကြပါစေလေ။
စာသင်ခန်းတံခါးကို အသာဖွင့်လိုက်တော့ ပိတ်ထားတာ ကြာသေးပုံမရတဲ့ အဲကွန်းက အေးမြမြလေငွေ့က မျက်နှာကို လာရိုက်ခတ်တယ်။ ခုံတွေက ဟိုဒီပြန့်ကျဲလို့။ စားပွဲဝိုင်းပေါ်က စာအုပ်တွေမှာလည်း အဖုံးပြုတ်တဲ့ စာအုပ်ကပြုတ်၊ ပြဲတဲ့စာအုပ်ကပြဲနဲ့။ မွစာကြဲနေတာ။ အမြင်မတော်လို့ စာအုပ်ချုပ်ပေးမယ်ဆိုပြန်တော့လည်း လက်မခံကြ။
ဘေးနားက စာအုပ်စင်လို့ထင်ရတဲ့ နေရာမှာလည်း ခဲတံတွေ၊ ကွန်ပါတွေ၊ ပုံဆွဲစက္ကူတွေ၊ စာအုပ်အဟောင်းတွေရော၊ အသစ်တွေရောနဲ့ စီကာစဉ်ကာမရှိ ပွလရမ်းခတ်နေတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်ရှာခိုင်းရင် မွစာကြဲနေတဲ့ စာအုပ်တွေကြားတစ်လှည့်၊ စာအုပ်စင်ပေါ်က စာအုပ်ပုံပေါ်တစ်လှည့်၊ ဘေးနားက ခုံတွေပေါ်မှာ ပျံဝဲတင်ထားတဲ့ အရုပ်တွေကြားမှာတစ်ဖုံ နဲ့ ဖွရှာတတ်တဲ့ အကျင့်တွေရှိတော့ ကျွန်မကပဲ ရောက်တိုင်း သင့်တော်သလို စီကာစဉ်ကာ လုပ်ပေးရတယ်။ ဒါကို တစ်ခါတလေ သူတို့လေးတွေက သဘောမကျ။
" Teacher မုန့်စားဦး… ကော်ဖီလည်း သောက် "
မုန့်ပန်းကန်လာချတဲ့ အစ်မကြီးက ဒီအိမ်ရဲ့ အစစ အရာရာ စီမံခန့်ခွဲသူလည်းဖြစ်သလို အလုပ်သမားတွေအပေါ်မှာလည်း သြဇာသက်ရောက်သူ။ ကလေးတွေနဲ့ အမျိုးတော်တယ်လို့ သိရတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေက မူဆယ်၊ ရွှေလီကနေ တစ်ဆင့် တရုတ်ပြည်မကြီးထိ အမြဲလို အရောင်းအဝယ်ကိစ္စ သွားလာနေတော့ အိမ်ရဲ့ ဦးစီးအဖြစ် အမကြီးကပဲ အလုံးစုံ တာဝန်ယူထားတယ်။ သူ့သြဇာက ကလေးတွေအပေါ်မှာက လွဲလို့ အလုပ်သမားအားလုံးပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
မိဘရင်ခွင်ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ရင်ငွေ့ကို တစ်နှစ်တာပတ်လုံးမှာမှ ရက်အနည်းငယ်ပဲ ခိုလှုံခွင့်ရတဲ့ ကလေးလေးတွေဟာ အချိန်နဲ့တပြေးညီ လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ စက်ရုပ်ပေါက်စလေးတွေလိုပါပဲ။ သူတို့ဟာ သတ်မှတ်ပြီးသား တိကျတဲ့ဇယားနဲ့အတူ ၂၄ နာရီပတ်လုံး လှုပ်ရှား အသက်ရှင်နေကြတဲ့ သူလေးတွေ။ သူတို့အတွက် အပန်းဖြေစရာက ဗီဒီယို ကာတွန်းကားလေးတွေ ကြည့်ခြင်းသာ။ နှစ်ကူးပွဲတော်တွေမှာ မိဘနဲ့အတူ လည်ပတ်ရချိန်တိုင်း သူတို့ မျက်နှာလေးတွေဟာ ပြုံးပျော်ရွှင်လို့။ အဲဒီအချိန်ဆို ကျွန်မလည်း အရင်က မကြိုက်ခဲ့တဲ့ တရုတ်လမုန့်တွေလည်းစားရင်း သူတို့နဲ့အတူ နှစ်ကူးကို ကြိုလေ့ရှိတယ်။
တစ်ခါတလေမှာ စက်ရုပ်ကလေးတွေကြားရှင်သန်ရတဲ့ ကျွန်မအတွက် စိတ်ပင်ပန်းမောဟိုက်ရတာတွေလည်း ရှိရဲ့။ သူတို့လေးတွေကို စာသင်ပြီးချိန်တိုင်း ကစားစရာအရုပ်မျိုးစုံနဲ့ ကစားခိုင်းတဲ့အခါ မောင်နှမချင်း အဝေမတည့်၊ စကားများ ရန်ဖြစ်ကြရင်း ထိုးကြကြိတ်ကြတာလည်း ရှိသေး။ တစ်ခါတစ်ရံကျတော့လည်း စာသင်ချိန်မှာ အချင်းချင်း စကားလှမ်းပြောကြရင်း ရန်ဖြစ်တတ်ကြလို့ ကြားဝင်ဖျန်ဖြေပေးရပေါင်းလည်း အကြိမ်များစွာ။ ကျွန်မရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း သူတို့ပေးတဲ့ အမှတ်တရ နာကျင်မှုလေးတွေနဲ့…။ သည်းခံခြင်းကို လက်ကိုင်ထားတတ်ခဲ့တာကတော့ နှစ်တော်တော်ကြာခဲ့ပြီ။
သူတို့လေးတွေက မန္တလေးရဲ့ International School တွေထဲက ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ တက်ကြတယ်။ အကြီးမိန်းကလေးနှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က ၁ဝနှစ်၊ တစ်ယောက်က ၉ နှစ်၊ အငယ်ဆုံး ယောက်ျားလေးကတော့ ၆ နှစ်သာရှိသေးတယ်။ သူက အားလုံးထဲမှာ အထက်မြက်ဆုံးနဲ့ အသွက်လက်ဆုံး။ သူတို့ကျောင်းမှာ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောကြပေမဲ့ အိမ်မှာတော့ သူတို့မိခင် ဘာသာစကားနဲ့ပဲ ပြောဆိုကြတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ ကျွန်မကို ကြည့်ပြီး ပြောဆိုကြ၊ ရယ်ကြနဲ့ ကိုယ့်ကိုရှေ့ထားပြီး ကိုယ့်အကြောင်း ပေါ်တင်ပြောနေတယ်ဆိုတာ သိနေတော့ အောင့်သက်သက်နဲ့သာ ပြုံးနေရတယ်၊ ကျွန်မမှ သူတို့စကား နားမလည်ဘဲ။
ကျွန်မ မှတ်မိသေးတယ်။ ကိုယ်က အင်္ဂလိပ်စကား ပြောနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ တစ်ခါမှ အင်္ဂလိပ်လိုပြောပြီး စာမသင်ဖူးတော့ ပထမဆုံးရက်မှာ အဆင်မှပြေပါ့မလား၊ ငါပြောတာ နားလည်ပါ့မလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ရှိခဲ့ပေမဲ့ လက်တွေ့ကျ တခြားစီ။ ကျွန်မက သဒ္ဓါနဲ့ အသုံးအနှုန်းအမှန်တွေနဲ့ အတိအကျပြောတာကို သူတို့ နားလည်ပေမဲ့ ကလေးတွေပြောတာကို ရုတ်တရက် ကျွန်မ နားမလည်။ အငယ်ဆုံးလေးက -
" Teacher, I game down not my computer " တဲ့။
ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ သဘောမပေါက်တဲ့ ကျွန်မ နောက်တစ်ကြိမ် မေးပြီးမှပဲ သူဆိုလိုချင်တာကို နားလည်သွားတယ်။ သူ့ဆီက ပထမဆုံးရတဲ့ မှတ်ချက်က -
" Teacher, you don't understand? You are fool! "
ကျွန်မမှာ စိတ်ဆိုးရလည်းခက်၊ ဘာပြန်ပြောရမယ်ဆိုတာ ရုတ်တရက် မစဉ်းစားနိုင်ခဲ့။ ဒီလို စကားမျိုး၊ အပြောမျိုးတွေနဲ့ သူတို့လေးတွေ အထာကျနေခဲ့တာ… သူတို့အတွက် ထမင်းစား ရေသောက်လိုများ လွယ်နေခဲ့ပြီလား…။
ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်က ဆရာသမားတွေအပေါ် ချစ်၊ ကြောက်၊ ရိုသေ၊ လေးစား ခဲ့တာမျိုး ခုခေတ် International ဆန်တဲ့ ကလေးတွေဆီမှာ အားလျော့လာခဲ့ပြီ။ အဘက်ဘက်က အဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတဲ့ ကလေးငယ်တွေဆီမှာ ရိုသေ ကိုင်းရှိုင်းမှု နဲ့ နာခံတတ်မှုတွေဟာ အနည်းငယ် ချို့ယွင်းလာခဲ့တာဟာ ခေတ်စနစ်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေအောင် နေနေကြတဲ့ ကလေးငယ်အားလုံးမှာများ ရှိနေကြပြီလား…။ သူငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းတတ်တဲ့ ကျွန်မကို သူတို့လေးတွေ ချစ်ခင်တယ်လို့ ထင်မြင်မိပေမဲ့ စကားအရာမှာတော့ သူတို့တွေ လက်ခံအောင် ကြိုးစားပြောဆိုရတာမျိုးတွေလည်း ရှိရဲ့။
ကျွန်မတို့တွေ အသက်ကြီးမှ သုံးဖူးကြတဲ့ ကွန်ပျူတာဆိုတာကိုလည်း ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သူတို့တွေ သုံးနေကြပြီ။ နောက်ဆုံးပေါ် i-Pad နဲ့ i-Phone ဆိုတာလည်း တစ်ယောက်တစ်လုံး။ i-Pad နဲ့ i-Phone ဆိုတာကို သူတို့နဲ့တွေ့မှာ မြင်ဖူးတဲ့ ကျွန်မ၊ အင်တာနက်ကနေ ဂိမ်းတွေဒေါင်းလုပ်ယူပြီး ဖုန်းထဲ ထည့်မရရင် ဆိုက်တွေမှာရှာ၊ စာတွေဖတ်နဲ့ ဖြေရှင်း သင်ပေးရပြန်တယ်။ တစ်ခါတလေမှာ သူတို့လေးတွေဆီကနေ သင်ယူရတာတွေလည်း ရှိပြန်တယ်။ ကိုယ့်တပည့်ပဲဆိုပြီး ပြောပြီးပြီးသွားမဲ့ ပုံစံ လွယ်လင့်တကူ ကတိပေးတတ်တာမျိုး၊ သူတို့ တစ်ခုခုလုပ်ပေးလိုက်တာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ မပြောမိလိုက်တာမျိုးတွေ ကျွန်မမှာ ပပျောက်သွားဖို့ သူတို့ကပဲ သင်ပေးကြတယ်။ အကဲစမ်းတတ်တဲ့၊ တုံ့ပြန်မှုကောင်းတဲ့၊ ဆင်ခြေများတဲ့ သူတို့လေးတွေကြား ကျွန်မ တစ်ခါတရံ အသက်ရှူမှားမိတဲ့ အကြိမ်တွေလည်း မနည်းခဲ့။ ခေတ်သစ်ထဲက International ဆန်ဆန် မျိုးဆက်သစ်လေးတွေကို နားလည်အောင်ကြိုးစားရင်း သူတို့လေးတွေနဲ့အပြိုင် ကျွန်မ ပြေးနေရပါတော့တယ်။
" Teacher………… "
အကြီးဆုံးမလေးကို စာရှင်းနေချိန် အငယ်ဆုံးကလေးက ကျွန်မလက်ကို အတင်းဆောင့်ဆွဲလိုက်တော့ ထိုင်ခုံပေါ်ကနေ သမံတလင်းမြေပေါ်ကို ခြေပစ်လက်ပစ် ကျွန်မ ပြုတ်ကျသွားတယ်။ ဒူးကလည်းနာ၊ ထောက်လိုက်တဲ့ ဘယ်လက်လည်း အနည်းငယ်အောင့်သွားတော့ ထောင်းခနဲ ဒေါသထွက်သွားချိန်မှာပဲ -
" Hey… Teacher… I know you wear what color… haha "
အို…. ကျွန်မ အနည်းငယ် ရှက်သွားမိတယ်။ ခပ်တင်းတင်းမျက်နှာထားနဲ့ သူ့ကို စိုက်ကြည့်လိုက်တော့ "Nothing" လို့ တစ်ခွန်းသာပြောပြီး သူမဟုတ်သလိုနဲ့ စက်ရှေ့မှာ ခပ်တည်တည် သွားထိုင်နေခဲ့တယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ကလေးပဲလေ ဆိုတဲ့ အသိစိတ်ဝင်လာတော့ ကျွန်မရဲ့ ဒေါသတွေ တဖြည်းဖြည်း ပြေလျော့သွားပါတော့တယ်။ သူတို့လေးတွေရဲ့ နေပုံထိုင်ပုံ၊ ပြောဟန်ဆိုဟန် အပြုအမူတွေက ကျွန်မအတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာမျိုး ရှိပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ သည်းခံပြီး ပဲ့ပြင်ပေးရမှာပဲ မဟုတ်လား…။ ကျွန်မက သူတို့လေးတွေရဲ့ " ဆရာမ " လေ…။
ကျောင်းကြီးထဲကို လှမ်းဝင်လာရင်း ကစားကွင်းထဲမှာ ဘတ်စကတ်ဘော ကစားနေတဲ့ ကလေးတစ်ချို့ကို ခဏတဖြုတ် ရပ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အရွယ်တွေက ၁၃ နှစ်၊ ၁၄ နှစ် အရွယ်။ ဒီအရွယ်က လျင်မြန်ဖျတ်လတ်ပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းချိန်။ ထမင်းစားချိန် ခဏတာအတွင်းမှာ ရတဲ့အချိန်အနည်းငယ်ထဲကနေ ကစားနေကြရတဲ့ ကလေးငယ်များ…။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ လျှောစီးတဲ့ ကလေးက စီး၊ ဒန်းစီးသူက စီးနဲ့ အနားမှာထိန်းပေးနေတဲ့ ဆရာမ ခပ်ငယ်ငယ်တွေကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ သူတို့အသက်က ကျွန်မထက်တောင် ငယ်ဦးမယ် ထင်ပါရဲ့။
မှန်တံခါးကို အသာတွန်းဖွင့်ဝင်ပြီး ခဏထိုင်စောင့်လိုက်တော့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို လက်ဆွဲပြီး ထွက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းက အသာလက်လှမ်းပြရင်း -
" Don’t' cry. Don't cry Mery. Play with your friends. OK! "
ရှိုက်ငိုနေတဲ့ ကလေးငယ်ကို ချော့မော့ပြီး ကစားကွင်းဖက်ကို ခဏထွက်သွားတယ်။
" မိုး… နင် ရောက်နေတာ ကြာပြီလား "
အနည်းငယ် နွမ်းလျပုံပေါ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ခေါင်းခါပြပြီး -
" မကြာသေးပါဘူး… နင်က စာသင်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ ကလေးပါ ထိန်းရတာလား "
" အင်း… ငါတို့ Assistant တွေက စာသင်ချိန် နည်းပါတယ်… Main Teacher တွေက အဓိကသင်ရတာပေါ့… သူတို့သင်နေရင် ငါတို့က နောက်ကနေ အတန်းထိန်းပေးရတယ်… ခုလို ကျောင်းလွှတ်ချိန်ဆိုလည်း ကလေးတွေနဲ့ အတူ ကစားပေးရတယ်… သူတို့ငိုရင် ချော့ရ၊ ရန်ဖြစ်ရင် ဖျန်ဖြေရနဲ့… ထမင်းလည်း ခွံ့ကျွေးရတယ်… တစ်ခါတလေ အလေး၊ အပေါ့ တွေတောင် လုပ်ပေးရသေးတယ် "
"ဟင်… ဟဲ့ အဲဒါတွေလုပ်ဖို့ လူ သက်သက်ရှိတယ် မဟုတ်ဘူးလား "
" အမယ်လေး… တစ်ခါတလေ သူတို့က မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်နေကြတာ.. မတတ်သာလို့ လုပ်ပေးတဲ့အခါ ကျလည်း ဖြစ်သလို ပြီး..ပြီးရော လုပ်ကြတာ… ငါတို့က ကိုယ့်ကလေးဆိုတော့ မနေနိုင်လို့ လုပ်ပေးရတာပေါ့ "
" နင်တို့ တစ်တန်းကို ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ "
" တစ်တန်းနဲ့တစ်တန်းတော့ မတူဘူးပေါ့… အလွန်ဆုံး (၁၅) (၂ဝ) ပေါ့… တစ်ချို့ ကျောင်းတွေမှာတော့ သုံးလေးဆယ် ရှိတယ် ကြားတယ် "
" နင့် လစာကရော "
" ၄ သောင်း "
" ဘာ… တစ်လလုံးမှ ၄ သောင်း ဟုတ်လား "
" အင်း… နောက်ကျရင်တော့ တိုးပေးမယ် ပြောတာပဲ… စိတ်တော့ရှည်ရမှာပေါ့ဟာ.. ခုခေတ်က ဒီအလုပ်ပဲ ဝင်တိုးကြတာမဟုတ်လား… အလုပ်ရတာကိုက ကံကောင်း "
သူ ပြောသမျှ နားထောင်ပြီး ကျွန်မ ရင်တွေ အတော်မောဟိုက်သွားတယ်။
ကျောင်းက ကျယ်ပြီး ကစားကွင်းတွေရှိပေမဲ့ အတွင်းမှာက အခန်းတစ်ခန်းစီရဲ့ အကျယ်က သိပ်မရှိ။ စာကြည့်တိုက် ရှိလားလို့ မေးကြည့်တော့ ရှိတော့ရှိတယ်။ တစ်ခန်း၊ နှစ်ခန်းပဲတဲ့။
" ကျောင်းမှာ စာကြည့်တိုက်တော့ ရှိတယ်… ဒါမဲ့ ဒီတိုင်းသွားလို့မရဘူး… Teacher ဆီက ကတ်ပြားနဲ့မှ သွားလို့ရတာ… ကတ်လိုချင်လို့ ပြောတော့ Teacher က လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး လုပ်လည်းမပေးဘူး… စာအုပ်ငှားလို့ရတဲ့ ရက်သက်သက်ရှိပေမဲ့ တစ်ခါတလေမှသာ ငှားလို့ရတာ… ဘယ်ရက်တွေမှန်းလည်း မမှတ်မိတော့ဘူး…" ဆိုတဲ့ ကလေးတွေပြောစကား နားထဲပြန်ကြားမိတယ်။
မိမိတို့ သားသမီးတွေကို အဆင့်မြင့်စေချင်လို့ အဆင့်မြင့်ကျောင်းတွေမှာ ငွေအပုံလိုက်ပေးပြီး ထားနိုင်ဖို့ ပြေးလွှားရုန်းကန်နေကြတဲ့ တချို့ မိဘတွေအတွက် သက်ပြင်းမောချမိပြန်တယ်။
စာသင်ခန်းတိုင်းရဲ့ နံရံတွေပေါ်မှာ ရုပ်ပုံကားချပ်တွေအပြည့်၊ ကလေးတွေရဲ့ Creativity မြင့်အောင် လုပ်ထားပုံရတယ်။ ဒါမဲ့ ကျွန်မ စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ကလေးတွေမှာ အမှန်တကယ်ပဲ Creativity ရှိရဲ့လား… ကလေးတွေကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေမှာရော အနုပညာခံစားမှု၊ တွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှု နဲ့ ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်တွေ ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရှိရဲ့လားဆိုတာ…။
ကျောင်းဝင်းကြီးထဲမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်လေးတစ်ခုကို အမိအရဖမ်းဆုပ် ဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးငယ်များရဲ့ အနာဂါတ်၊ အဆင့်မြင့် ပညာတွေသင်ယူနေကြတဲ့ ကလေးငယ်များရဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ စွမ်းရည်နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားများ၊ ထိန်းသိမ်းရမယ့် ရှိသင့်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများ… ဘယ်လိုအနေအထားနဲ့ ရှိကြမလဲ…။ ထည်ဝါခန့်ညားလှတဲ့ ကျောင်းကြီးကို ကျောခိုင်းလိုက်ချိန် နေ့ခင်းအပူက လမ်းမထက်မှာ အရှိန်တငြီးငြီးနဲ့ ပူပြင်းတောက်လောင်နေသလို၊ ကျွန်မ ရင်ထဲမှာလည်း အပူတွေက တလှပ်လှပ်နဲ့။ အဲဒီအပူတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဘာသာပြန်နိုင်တဲ့ အင်အားတော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်မှာ ကင်းမဲ့နေခဲ့တယ်...။
အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ ဆိုတဲ့ စကားပုံကို လူတိုင်းနီးပါး သိပေမဲ့၊ ပြောကြပေမဲ့ တကယ်တမ်း အလုပ်ဟူသမျှကို တန်ဖိုးထားကြပါရဲ့လား။ စကားပုံဟာ စာအုပ်ထဲမှာ သိမှတ်သားဖွယ်ရာအနေနဲ့ပဲ ကျန်ရှိနေခဲ့တော့မယ်။ ခေတ်အခြေအနေပေါ်လိုက်ပြီး လုပ်ငန်းတွေ ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လာကြသလို၊ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ အလုပ်တွေမှာ တစ်နေ့တခြား လုပ်လိုသူတွေ ဒုနဲ့ဒေး။
ကျွန်မ စာရေးနေပါတယ်လို့ပြောရင် "အော်… ဟုတ်လား" ဆိုပြီး သနားတဲ့ မျက်လုံးမျိုးနဲ့ ကြည့်တတ်သူတွေရှိသလို၊ စာသင်နေပါတယ်ပြောရင် "ဟယ်… ဟုတ်လား… ဒါဆို ထောမှာပေါ့… ခုခေတ်မှာ ဆရာမ အလုပ်က အရမ်းတွက်ခြေကိုက်တာ" လို့ ဆိုပြန်သူတွေလည်း ရှိရဲ့။ ကျွန်မအတွက်ကတော့ တွက်ခြေကိုက်တယ်၊ မကိုက်ဘူးဆိုတာထက် ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ လိပ်ပြာလုံဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
ကျွန်မ ချစ်တဲ့၊ ကျွန်မရဲ့ နှလုံးသားအာဟာရပြည့်စေတဲ့ အနုပညာရသတွေကို အောင်မြင်စွာ ပုံဖော်နိုင်ဖို့အတွက် အများနဲ့တစ်ယောက် လျှောက်လှမ်းရာမှာ ပတ်ဝန်းကျင်က အသိအမှတ်ပြုတဲ့၊ ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်းနိုင်တဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ဖို့ ကျွန်မ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ဒီလမ်းမှာ လိပ်ပြာလုံစွာနဲ့ ဆက်လျှောက်နေဦးမှာပါပဲ။ အများမိုးခါးရေသောက်လို့ သောက်ခဲ့တာမျိုး မဟုတ်တဲ့ ဒီခရီးမှာ တွေ့ဆုံရတဲ့ ပကတိ အရိုးခံစိတ်လေးတွေဆီက သူတို့ကိုယ်တိုင် မသိလိုက်တဲ့ ကာလာစုံဟာ ကျွန်မကို အရောင်တွေခြယ်ပေးနေမယ်ဆိုလည်း ကျေနပ်စွာ လက်ခံသွားမှာပါ။
အလွှာစုံရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုကြား ပွင့်လန်းလာမဲ့ ပန်းလေးတွေမှာ ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ဓာတ်၊ ခွန်အားတွေနဲ့အတူ မြင့်မားတဲ့ အနာဂါတ်တွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်စေဖို့၊ ပန်းလေးတွေပေါ်မှာ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ တင်လာမဲ့၊ ထင်ကျန်နေမဲ့ အစွန်းအထင်းလေးတွေ ဝေးလွင့်စေဖို့၊ ပွင့်ဖတ်လေးတွေ ရိုးသား ဖြောင့်မတ်စွာ ပွင့်အာစေဖို့၊ ယဉ်ကျေးလိမ္မာစွာ အထက်ကို တိုးတက်စေဖို့ ရည်ရွယ်ရင်းနဲ့…. ကျွန်မကလေးတွေအတွက် စိတ်ရှည်၊ သည်းခံ၊ ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ ခွင့်လွှတ်စိတ်အပြည့်နဲ့ ဆရာမကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ရှေ့ဆက်ပြီး ကျွန်မ သူတို့လေးတွေဆီကနေ သင်ယူရမှာတွေ ကျန်နေသေးပါရဲ့။
Copy From June-moe Blog
Credit Link ---> http://june-moe.blogspot.com/2012/12/blog-post.html